Ukuthengiswa kukaJanuwari, basebenzise ngokuqaphela! | Bezzia
UMaria vazquez | 09/01/2022 22:00 | Iindaba
NgoLwesihlanu ophelileyo intengiso yemveli kaJanuwari. Intengiso ebonisa ukuba yonke into iya kuyiphucula intengiso xa kuthelekiswa nephulo lentengiso lika-2021 kwaye esiqinisekileyo ukuba uninzi lwenu luya kube sele lunikezele, ngaba siyaphazama?
Abanye ngaphandle kokuzimasa intengiso ngokufanelekileyo uya kuxhamla izaphulelo ezinkulu ngeenyanga zikaDisemba noJanuwari. Kwaye kukuba ukunatyiswa kweentengiso kuyindlela ehambe nathi kwiminyaka yakutshanje. Zombini ziyindlela entle yokufumana ezo mveliso sizifunayo ngexabiso elifikelelekayo, nangona kunjalo, ayizizo zonke izinto ezihambayo!
Iivenkile kuqala zithatha ithuba lokufunwa kwezipho zeKrisimesi zize zibhenele ekuthengiseni oko iqala ngokusesikweni nge-7 kaJanuwari, emva kwemini yooKumkani. Kwaye nangona iivenkile ezininzi ziqala ukukhuthaza izaphulelo kwiveki engaphambili, lo isengumhla apho sinokuthetha ngokusemthethweni malunga neentengiso.
1 Izitshixo zokuthatha inzuzo kwiintengiso
1.1 Musa ukuchitha imali engaphezulu kunoko unokuyisebenzisa.
1.2 Landela amaxabiso ukuze wonge
1.3 Jonga iimeko zokuthenga
1.4 Gcina itikiti kunye nebango
Izitshixo zokuthatha inzuzo kwiintengiso
Kwaye zithini izitshixo zokuthatha inzuzo kwiintengiso? Iintengiso ziza kudlula i-50% yesaphulelo kwezinye iivenkile, ngoko zinjalo kulula kakhulu ukuthenga into esiyidinga ngokwenene. Nangona kunjalo, izaphulelo aziyonto ngaphandle kwesicwangciso sokusikhuthaza ukuba siqhubeke nokuthenga apho kulula kakhulu ukuwa. Yiphephe kwaye uthathe inzuzo yokuthengisa ngezi ngcebiso zilandelayo.
Musa ukuchitha imali engaphezulu kunoko unokuyisebenzisa.
Ukuthengisa lixesha elihle loku thenga ngaphandle kokuchitha ngaphezulu. Nangona kunjalo, ukuba uthenga izinto ezithile ngesizathu nje sokuthotywa, ugcino olunokubandakanya intengiso luya kube luphelile. Yaye ungayiphepha njani?
yenza uluhlu kwangaphambi koko kufunekayo.
Ukuqwalasela uluhlu lwangaphambili, ixabiso onokuthi ulihlawule kwiimveliso ezinjalo kunye nemeko yakho yezemali zibekele uqingqo-mali uze uluhloniphe.
Beka izinto ezibalulekileyo kwindawo yokuqala. Ukuba uhlahlo lwabiwo-mali alukuvumeli ukuba uthenge yonke into oyifunayo, beka kuqala eyona nto iyimfuneko.
Landela amaxabiso ukuze wonge
Ngaba ngokwenene uyonga imali ngokuthenga into ethile kwintengiso? Khumbula ukuba izinto ezithotyiweyo kufuneka babonise ixabiso labo lokuqala ecaleni kwesaphulelo, okanye ubonise ngokucacileyo ipesenti yesaphulelo. Nangona ufuna ngokwenene ukuthenga into emele utyalo-mali olukhulu kuwe, eyona nto ifanelekileyo kukuba iinyanga ngaphambi kokuba ulandele inqaku kwaye uqaphele indlela ixabiso layo eliguquguquka ngayo ukwazi ukuba ngokwenene uhlawula ngaphantsi.
Jonga iimeko zokuthenga
Kumaziko athile iimeko zokuthenga zinokwahluka ngexesha lokuthengisa. Basenokungazamkeli iintlawulo zekhadi letyala, bamisele iimeko ezintsha zotshintsho okanye bangamkeli ukubuyiselwa imali. Ziyakwazi, kodwa ezo meko kufuneka zichazwe ngokucacileyo. Xa uthandabuza, zihlole!
Yintoni engafanele itshintshe yinkonzo emva kokuthengisa kunye isicelo sewaranti. Ezi, nokuba uthenga imveliso ngexesha lokuthengisa okanye ngaphandle kwelo xesha, kufuneka zifane. Ungabavumeli bakuqhathe!
Gcina itikiti kunye nebango
Gcina itikiti kuzo zonke izinto ozithengileyo xa ufuna utshintshiselwano, ukubuyiselwa imali okanye ufake ibango. Kwaye ukuba ufuna ukutshintsha okanye ukubuyisela into, yigcine kwibhokisi yayo. Ayizizo zonke iziseko ekufuneka zibuyise imali yakho, kodwa uninzi luyakunika ithuba lokuyitshintshisa okanye ufumane indawo yokuthengisela ngexabiso layo oza kuyisebenzisa kamva kwivenkile ngokwayo.
Njengomthengi ngexesha lokuthengisa uya kuba namalungelo afanayo njengalo naliphi na ixesha lonyaka. Ukuba kukho ingxaki kwaye ayisonjululwanga ngoxolo, uya kuhlala unokhetho lokuyenza cela iphepha lebango kwaye ucinge kuyo ngesikhalazo sakho okanye izikhalazo zakho.
Ukuthenga e amaziko athembekileyo Kwaye ngokulandela ezi ngcebiso, uya kukwazi ukonwabela ukuthengisa kukaJanuwari ngendlela enempilo, ukuthenga ngobulumko kwaye ngaphandle kokuzisola emva kokuchitha ngaphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Ukuthengiswa kukaJanuwari, basebenzise ngokuqaphela!
Iingenelo zetyuwa yolwandle kumzimba kunye neenwele